Ikusasa Lizofaka iMicrosoft | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 20, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 20, 2011 Douglas Karr
Angikhulumi ngeMicrosoft ngokwanele ku- Martech Zone. Akuthetheleleki ngempela ngoba inkampani isivele ine-footprint enkulu. Lapho ngikhuluma ne-COO yeLiquidSpace, UDoug Marinaro, nangesonto eledlule ngikhuluma no UJosh Waldo, IMicrosoft yenza izinyathelo ezingakholeki ngokwanele ekubekeni isisekelo nomninimabhizinisi amancane. Lokhu kutshalwa kwezimali ekuqaleni kwezimpilo zezinkampani yikhona okuzokhokhela imali enkulu iMicrosoft ngokuzayo.
UJosh Waldo wayeyi-SMB (Business Small and Medium-sized Business Director) kanye ne-Solution Partner Director Director (Manje unguMqondisi Omkhulu Wezimakethe Ezintsha Neziteshi Eziqhamukayo kwa-Microsoft). UJosh wabelane nami ngezinombolo ezithile ebezimangaza… Ukusetshenziswa kweMicrosoft $ 9.5 Billion (ngeB) ocwaningweni nasekuthuthukisweni njengamanje. Okumangalisa nakakhulu ukuthi i-70 kuya ku-90% yaleso sabelomali izogxila efwini! Hewu.
Isibonelo esisodwa sokuthi iMicrosoft isebenza kanjani nama-SMBs I-BizSpark.
Ukusiza ukuqala kokuqala kobuchwepheshe besigaba sokuqala ukuthi kuphumelele ngesoftware ye-Microsoft, iBizSpark inika amandla ukufinyelela emphakathini wabalingani emhlabeni jikelele- bonke ababambe iqhaza ekusekeleni ukwenziwa okusha okuvuselelwa yi-software kanye nesizukulwane esilandelayo sabosomabhizinisi bezobuchwepheshe.
Ezinye zezinkampani ezisebenzisana nazo ziyamangalisa kakhulu:
Xero i-accounting, ukukhokhisa kanye ne-software yasebhange
Gust - indawo yokwakha iphrofayli yokuqalisa futhi uxhumane nabatshalizimali abangama-35,000.
I-Mopapp - Isicelo sokulandela ukuthengisa kuzo zonke izimakethe zeselula.
UmthethoPivot - insiza yomthetho ekhishwe abantu abaningi yamabhizinisi.
oDesk - isiza sokuxhuma nezinsizakusebenza ezikude zabasebenzi nganoma yini kusuka ekuthuthukisweni kuye kusevisi yamakhasimende.
Ukungasho izinhlangano ezisiza imbewu, ukuxhasa nokuqalisa izinkampani zokuqalisa. Lapha e-Indianapolis sibonile impumelelo yenye yalezi - Impelasonto yokuqalisa.
IBizspark ayigcini nje ngokuxhumanisa amabhizinisi nemali, imikhiqizo noma abalingani, futhi isebenza ukusiza lezi zinkampani ngezidingo zazo zokuqeqesha nezokumaketha. Ngena ngemvume bese uzothola uhlu olumangazayo lwemicimbi nezinsizakusebenza endaweni yangakini ukukusiza ngokuqalisa ibhizinisi eliphumelelayo. IBizspark iphinde ixhumanise abafundi nebhizinisi. Cabanga ngalokho… kusuka kumfundi kuya ekuqaleni kuya kumabhizinisi amancane, iMicrosoft inika amabhizinisi lonke usizo abaludingayo. Lelo impela isu!
Elinye lalawo mabhizinisi kwakungu LiquidSpace, uhlelo lokusebenza oluhle olwakhiwe kufayela le- Ipulatifomu leWindows Azure. ILiquidSpace iyisayithi nohlelo lokusebenza lweselula lapho abasebenzi beselula bengathola khona indawo abasebenza kuyo, noma ngabe kumahhala, kutholakala amahora ambalwa, usuku noma ngaphezulu. Uhlelo lokusebenza lweselula lunikwe amandla indawo, ngakho-ke ungandizela edolobheni bese uvula isikhala esitholakalayo ngokushesha.
Izinkampani nabanikazi bezindawo zokuhweba abanegumbi bangathumela ukutholakala kwabo kuLiquidSpace. Kumahhala uma isikhala simahhala. Uma isikhala sibiza imali, iLiquidSpace ithola iphesenti lemali engenayo. Ngokukhuluma nomsunguli we-LiquidSpace kanye ne-COO Doug Marinaro, bajoyine iBizSpark futhi bamukela ngokushesha ipulatifomu ye-Azure. Kungakapheli amasonto ayisithupha okuxhaswa, iLiquidSpace yayiyi-beta. UDoug uthe izindleko ngaphansi kwesikweletu sakhe sefoni ephathekayo.
ILiquidSpace manje inezindawo ezingaphezu kuka-200 ezibhalisiwe, ikakhulukazi eCalifornia. Le nkampani manje inabasebenzi abangama-20 abasebenza kude phakathi kweMinneapolis kuya eMinsk nendlunkulu ePalo Alto. UDoug uthe into enhle kakhulu ngeplatifomu nokusebenza noMicrosoft ukuthi ukwazile ukugxila ekukhuliseni ibhizinisi kunokukhathazeka ngobuchwepheshe. Unethemba lokuthi ukukhula kwepulatifomu ye-Azure kuzokhula kahle nenkampani iminyaka.
Okuningi ku-Microsoft Azure Platform:
Uma ubanjwe ngasese, ungaphansi kweminyaka emithathu ubudala, okwenza okungaphansi kuka- $ 1M US nokwenza isoftware… ungakwazi bhalisela manje ubulungu bakho be-BizSpark.
Indlela Ithebhulethi Elishintsha Ngayo Ibhizinisi
I-Oct 23, i-2011 ku-11: i-04 PM